.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Ringtones စာမျက်နှာ
Ringtone တွေကို ဒေါင်းယူမယ်ဆိုရင် Link ကို Right Click >> Save Link As ကို နှိပ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ဒီနေရာမှာ တစ်ချက်ကလစ်ရုံနဲ့ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
1 ကိုကိုရေ ဖုန်းလာနေတယ် Click Here2OK Alright Click Here
3 မြနန္ဒာ Click Here4ယောက်ျား Click Here
5 အပြစ်မမြင် Click Here6တိုင်ပြောမယ် Click Here
7 I Love You Click Here 8 ခုနှစ်သံချီ Click Here
9 ပြန်ချစ်ရမယ် Click Here 10 နင်ပဲတော်တယ် Click Here
11 မြန်မာ့တီးလုံး Click Here 12 မလွမ်းရဲသေးဘူး Click Here
13 ကယ်ကြပါဦးရှင် Click Here 14 အိမ်ပြန်ချိန် Click Here
15 မြန်မာအဆိုတော် နာမည်များ Click Here 16 ဗူးသီးနုနု မခူးရ Click Here
17 တော်လိုက်တာနော် Click Here 18 လွမ်းနေတုန်း အိပ်မက် Click Here
19 တင်းတယ် [ အေသင်ချိုဆွေ ] Click Here 20 ငါမင်းကို သတ်ချင်တယ် Click Here
21 တန်ပြန်သက်ရောက်မှု Click Here 22 ကိုကိုလူဆိုးကြီး Click Here
23 Your My Ice Cream Click Here 24 100 တန် Click Here
25 As Long As You Love Me Click Here 26 Boome Bome Bome Click Here
27 Cat Dog Song Click Here 28 Cute Kid Sms Click Here
29 ဒကာလေး Click Here 30 Dogs Vs Cats Click Here
31 Dubi Dam Dam Click Here 32 အိမ်ကွင်းအဝေးကွင်း Click Here
33 ရောသမမွှေ Click Here 34 နတ်ဒိုး Click Here
35 Phone Speaking Click Here 36 ပြန်မလှည့်ကြည့်ဘူး Click Here
37 စားမလား Click Here 38 တောင်ပေါ်ကရှမ်းကလေး Click Here
39 Single Sms Tone. Click Here 40 စုတာစု Click Here
41 Vista Startup Click Here 42 Windos Xp Remix Click Here
43 သူမကဂျယ်လီ ကျွန်တော်က ကော်ဖီ Click Here 44 ဖုန်းကိုင်လိုက်နော် Click Here
45 Disco Click Here 46 Funny Sms Funny Sms
47 Good Morning Click Here 48 To The Floor Click Here
49 Fire Alarm Click Here 50 မျက်နှာ [ IMP ] Click Here
Posted by Thurainlin at 09:18